DAAWO SAWIRRO: Sidee ugu suurta-gashay ITOOBIYA inay hesho xilka Xoghayaha fulinta ee IGAD? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Sidee ugu suurta-gashay ITOOBIYA inay hesho xilka Xoghayaha fulinta ee...
Addis Ababa (Halqaran.com) – Wasiirkii hore ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka Xoghayaha fulinta IGAD, xilkaas oo uu dhawaan u magacaabey Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
DF Soomaaliya oo loolan adag ugu jirtay heliada xilkaas ayaa waxaa ay u sharaxday Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdisalaam hadliye Cumar, hayeeshee dowladaha Kenya iyo Itoobiya oo isku wareejiyey xilalka xoghayaha iyo guddoonka IGAD ayaa markale waxaa ay la wareegeen labadaasi xil.
Xogheyaha fulinta IGAD ayaa waxaa horay u ahaa Maxbuub Macalin, waxaana haatan uu xilka si rasmi ah ugu wareejiyey Xoghayaha Cusub ee Fulinta IGAD Dr Workneh Gebeyehu.
Shir ay dhawaan ku yeesheen Madaxda Urur Goboleedka IGAD Magaalada Addis Ababa ayaa waxaa laga shaaciyey in Soomaaliya u tanaasushay Itoobiya, balse Jabuuti ay diiday taas oo keentay in Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu safar deg deg ag ku tago si uu u qanciyo.
Ugu dambeyn, dalalka Kenya iyo Itoobiya ayaa waxaa ay kala hoggaamin doonaan Xoghayaha Fulinta IGAD iyo Guddoonka IGAD oo dhawaan uu la wareegi doono Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Xogheyaha fulinta IGAD